को उद्देश्य: ट्रान्सकाकमनिक एसिड (ड्रग ट्रान्सपायर) को मूल्यांकन महिला मा महिला मा एक आंशिक स्थल संग महिला मा एक आंशिक स्थल संग गर्भावस्था र Gineculic को साथ ।
<< probsters 45 गर्भवती महिलाहरूको मुख्य समूहमा, ट्रान्ससेमहरूको हेमिस्टेटिक थेराप्टी (स्टेडा) ले रक्तस्राव समाप्त हुनु अघि 5500 मिलीग्राम 1 1500 मिलीग्राम देखि शुरू भयो रोक। तुलना समूहमा -0 जना बिरामीहरू छन् जो, बिरामी उपायहरूको पूरकमा हेरोस्टिकूपी थेरापी सोडियम एट्वालेटको औषधिले गरेको थियो। सेक्स पर्चाबाट रक्तचाप, सेवानियो रिग्रेसन, अस्पताल लामो समयसम्म, गर्भावस्थाको नतिजामा बसोबास र नतिजा बढ्दै गएको थियो।
परिणामहरू। ट्रान्सकासामा प्रयोग गर्ने चर्चाको तीव्रता घट्दा 1 24..6 ± ± ±2± घण्टा पछि मनाइएको थियो, रक्तस्रावको अवधि, रबिनको अवधि थियो, रक्तस्रावको अवधि थियो। विश्वसनीय रूपमा अधिक - 9.9 ± 0.2 दिन (P
साहित्य: 1। Vasillvev s.a., vinogodaw v.l., Gmmjian e.g. ट्रेचम - एन्टिफिइबियन हेमिस्टेटिक / थ्रोरोबोसिस, हेमस्टिस, रिहेमिशन। - 200 .. - № 1. p.228-29।
क्षतिग्रस्त जहाजहरूबाट रगत बगिरहेको विभिन्न आकारहरूको गुहा हो। गर्भावस्थाको बेला एमनेट्टामाको परिणाम स्वरूप बिभिन्न कारहरूहरूको प्रभावको परिणामको रूपमा हुन सक्छ, जसले भ्रुण अण्डाको टुक्रामा पुर्याउँछ।
प्राय: "हेमट्टामा" शब्द केहि गम्भीर चोट संग सम्बन्धित छ। तसर्थ, धेरै गर्भवती महिलाहरू प्रारम्भिक सर्तमा एक अल्ट्रासरस्वाउन्डको अवधिमा सुनेको भए कि रेट्रोचिठियल हेमोतामा गर्भाशयमा फेला पर्यो, तिनीहरू आतंक गर्न थाल्छन्। र यो आतंक एकदम राम्ररी बुझ्न सकिने छ, किनकि गर्भावस्थाको क्रममा गर्भाशयमा हेक्टरले फल अण्डाको आंशिक अस्थिरता र अवरोधको धम्कीको अर्थ राख्छन्। यद्यपि यो नबिर्सनुहोस् अतिरिक्त स्नायुहरूले मात्र अवस्थालाई बढावा दिन सक्छ। बाटोमा, यो यति विरलै फेला परेन र प्राय: --- हप्ताको अवधिको लागि प्राय: फेला परेको छ।
हेमोट्टाको गठनको कारणहरू धेरै धेरै छन्। आनुवंशिक, हार्मोनल विकार, संक्रामक वा दीर्घकालीन प्रत्यावक रोगहरू, संक्रामक वा नर्भस भार, र यौन संभोग पनि गलत हुन सक्छ।
नमस्कार। मैले onember हप्तामा हेमताम पनि भेटें, अस्पतालमा राखे। पहिले नै 45 45 दिनसम्म छ, हेमट्टामाको आकार 48 48x18 हो, समाधान गरिएको छैन र अब म 12 हप्तामा पुगेको छैन। खतरा सुरक्षित गरिएको छ। मलाई भन, त्यहाँ कोही थियो, र के गर्ने। म 200, म्याग्निन B6, भिटामिन ई, ट्राटलबेम, कुपारहन इंजेनन्स र पेस्टल शासन स्वीकार गर्दछु। त्यहाँ कुनै सुधारहरू छैनन्। बच्चा सामान्यतया विकसित हुन्छ। कृपया मद्दत गर्नुहोस्, धेरै चिन्तित।
चिन्ता नगर्नुहोस्! मेरो एक छोरी 1.1 छ र त्यहाँ एक टुक्रा थियो। अस्पताल ढल्किए, डुप्लिस्टन, ट्रान्सपेट र चुम्बक B6। एक हप्ता पछि सबै गए। यदि सम्भव छ भने, घर छ, यौन विश्राम।
<< p> स्टार्टरका लागि - शान्त, नहुरी र अनुभवहरूले यहाँ सहयोग गर्दैन। र डाक्टरमा भाग्नुहोस् - उपचार रद्द गर्न। मलाई कडा टोक्सोसिलोसिसको साथ अस्पतालमा भर्ना गरियो, मैले अल्ट्रासाउन्डमा rhg पत्ता लगाएँ। नतिजा स्वरूप, तिनीहरू डुफ, म्याग्निट B6 र अझै पनि धुलोमा दफन गरियो। एक हप्ता पछि, अल्ट्रासाउन्डले नयाँ छुटकारा देखायो, तर days दिन पछि सबै ठीक थियो। समय मा मुख्य चीज डाक्टरहरु लाई सम्पर्क गर्न र ट्र्याक परिवर्तन।
मसँग पनि थियो। पहिले, छुट्याउने, र त्यसपछि यो एक बदलाथेली हेमट्टामा भयो। सब भन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको झूट बोल्नु हो! HEMatToma मा, म दुविधा द्वारा निर्धारित थियो। To देखि 11 हप्तादेखि अस्पतालहरूमा झूट। अन्त्यमा, TTT, सबै कुरा भयो!
<< p> मेरो हालको गर्भावस्थाको लागि, त्यहाँ पहिले नै दुई हेमोटमास) भएको थियो) सबै कुरा गयो (डब्ल्यूएचटीहरू 1 टेबल एक दिन 1 तालिका) ). जुडी तपाई!)))
_ Olga, मुख्य कुरा चिन्तित छैन! तपाईंले लेख्नुभयो कि सबै अझै अपलोड गरिएको छ र हेमोतामा हराउँछ! मुख्य कुरा, तर तपाईंको स्थितिमा यो अस्पतालमा पूर्ण रूपले सुरक्षित हुनेछ। अब अफसोस गर्नुहोस्। के तपाईं हप्ताको लागि झूट बोल्न सक्नुहुन्छ? अझै, डिमा जान दिदैन, र तपाईंलाई आवश्यक पर्दछ।